Okujwayelekile - Ama-Absolut Viajes | Ukuhamba kwe-Absolut (Ikhasi 2)
Kunamasiko amaningi eFrance esingawagqamisa. Kepha sisele nokugxila kakhulu okufanele ukwazi. Ingabe usukulungele noma usukulungele?
Yini ongayibona eTokyo
Uyazi ukuthi yini ongayibona eTokyo? Lapha sikuhambisa ohambweni olubonakalayo, ukuze ungaphuthelwa yimininingwane ekuvakasheni kwakho okulandelayo enhlokodolobha yaseJapan.
IMillau Viaduct ingenye yaleyo misebenzi enomsebenzi omuhle ngemuva kwayo. Namuhla sithola zonke izici zayo nomlando wayo.
Okubizwa ngokuthi yiCapitoline Museums kungenye yezindawo ezinkulu zokuma lapho sivakashele eRoma. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi uzothola ini kuwo?
Uma ufuna ukwazi konke okudingayo ukuze uthole ithikithi lakho lokuya eVatican, lapha siyakubonisa. Kanjani, kuphi futhi kangakanani? Sikukhipha ekungabazeni.
Okufanele ukwenze eBerlin
Uma ucabanga ukuthi wenzeni eBerlin, sikunikeza uchungechunge lwezindlela zokuzilibazisa ongeke uzenqabe. Ngabe ufuna ukuthola ukuthi imayelana nani?
Funda okwengeziwe ngethempeli likaDebod. Ufike kanjani ezweni lethu, imvelaphi yawo kanye namahlelo awo ukuze akwazi ukuvakasha kuwo.
Ngabe uhlela ukuvakashela i-Isla Mágica eSeville? Ngemuva kwalokho ungaphuthelwa yiyo yonke idatha esiyishiya lapha ngoba uyayithanda.
Uzungeza kanjani iParis
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi uzungeza kanjani iParis, izindlela zayo zokuhamba namathikithi noma amakhadi ayo? Yonke imininingwane ukuze ukhathazeke ngokuzijabulisa kuphela.
Ikholomu kaTrajan ingesinye sezikhumbuzo ezibaluleke kakhulu eRoma. Unomlando omningi nomlando ngemuva kwawo okufanele wazi.
Ukubuyekezwa kwemikhuba yaseBrazil ozoyazi neminye okufanele uzithole. Njengoba zonke ziyingxenye yefa lakhe.
ICastillo de Colomares ingesinye sezikhumbuzo ezinhle kakhulu futhi itholakala eBenalmádena. Ukuvakasha ngaphezu kokubalulekile!
Izinhlelo ezinabantwana eMadrid
Izinhlelo ezinabantwana eMadrid zingahluka kakhulu. Ukunikezwa kokuzilibazisa komndeni wonke okufanele ukwazi futhi ukujabulele.
IMontjuic Castle ingenye yezindawo ezibalulekile ongazivakashela lapho siya eBarcelona. Uma ungazi namanje, sikushiya nale mhlahlandlela.
IBuda Castle ingelinye lamaphuzu ayisisekelo okufanele uvakashelwe eBudapest. Uzothola indawo enomlando omningi nezinganekwane
Izimpawu zomhlaba zaseRoma
Kunezikhumbuzo eziningi eRoma esingakwazi ukuzikhohlwa lapho sivakashela idolobha. Kungakho namuhla sivakashela konke okubalulekile
Izikhumbuzo zaseMadrid ongeke uziphuthe
Kusukela eMayor yayo yePlaza kuya ethempelini eliyingqayizivele leDebod, lezi zikhumbuzo zaseMadrid ongeke uziphuthele zenza umhlahlandlela ongcono kunhloko-dolobha yaseSpain.
Ama-cathedral amahle kakhulu eSpain
Sibuyekeza amasonto ababhishobhi amahle kakhulu eSpain. Izindawo ezinokuthakazelisa okuningi, izindaba nezinganekwane ngemuva kwazo. Ukuvakasha okuthile okubalulekile
Yini ongayibona eNew York: izindawo ezihamba phambili edolobheni ezingalali
IStatue of Liberty, iBrooklyn noma i-Times Square eyisithonjana ngezinye zezindawo okumele zibonwe eNew York. Ingabe ufuna okuningi?
Isigodlo Sezindela saseLeyre
I-Leyre Monastery ingesinye sezakhiwo ezibaluleke kakhulu zomlando nezokwakha ezweni lethu. Ukuvakasha okubalulekile okuzocatshangelwa
Imidanso engu-8 yomhlaba
Le midanso engu-8 yomhlaba ayikumemi nje kuphela ukuthi uzodansa, kepha futhi nokuqonda kangcono kakhulu amathonya namasiko amakhona ahlukahlukene eplanethi.
Kuyini ukulala kosofa
I-Couchsurfing isengenye yezindlela ezinenzuzo kakhulu zokuhamba. Thola ukuthi kuyini nokuthi kusebenza kanjani ngaphezu kwezinzuzo zako ezinkulu.
Izigodlo ezinhle kakhulu eSpain zimele umbono wesikhathi esedlule, umhlaba wezinganekwane nomlando uwonke, esiwubukezayo namuhla.
Umkhakha weNyuvesi yaseSalamanca
I-façade yeNyuvesi yaseSalamanca inemininingwane eminingi okufanele icatshangelwe. Izidalwa eziyizinganekwane, amakhosi ngisho neselesele elinenganekwane.
IGüell Palace ingenye yezindawo okufanele uhlale uzikhumbula. Umsebenzi wobuciko waseGaudí, wamemezela iNdawo yamaGugu Omhlaba.
Isigodlo saseSan Juan de la Peña
I-Monastery yaseSan Juan de la Peña ingenye yezindawo eziyizifanekiselo kakhulu ezikhathini zasendulo. Indawo ebalulekile egcwele izinganekwane okufanele wazi
IStrasbourg Cathedral ingenye yamatshe ayigugu amakhulu okwakha. Inomlando omningi nezifiso okumele sizazi.
I-Setenil de las Bodegas: ubuciko betshe lokuqopha
Njengoba ithathwa njengelinye lamadolobha anelukuluku e-Andalusia, iSetenil de las Bodegas ikumema ukuba uhambe uhambo olumnandi phakathi kwezindlu eziqoshwe edwaleni uqobo.
Ukwazi okwengeziwe ngoMbhoshongo wasePisa kubalulekile. Ngokwakhiwa kwayo, ubuhle bayo nendawo ezungezile noma izinganekwane ezigcwele kuyo.
Izihloko-dolobha zase-Middle East
AmaSulumane amahle, izifunda zezezimali zesikhathi esizayo noma izindawo ezibhalwe umlando zakha lezi zihloko zaseMiddle East ongeke uziphuthe.
IPalacio del Infantado itholakala eGuadalajara futhi kuphela nge-façade yayo lapho ibizwa ngegama lesinye sezigodlo ezinhle kakhulu zaseSpain Renaissance.
Izimangaliso Eziyi-7 Zomhlaba Wesimanje
Izimangaliso eziyi-7 Zomhlaba Wesimanje zisicwilisa emafeni agcwele umlando nezimfihlo ezivela eChina ziye ezindaweni eziphakeme zasePeru.
Uma ucabanga ukuhambela eLisbon, awukwazi ukuphuthelwa ukuvakashela iTorre de Belém. Lapha uzothola yonke imininingwane okufanele uyazi.
Isigodlo sezindela saseGuadalupe
Thola i-jewel, egcwele izinganekwane, umlando nokuhamba ngesikhathi. Isigodlo sezindela saseGuadalupe singesinye sezivakashi ezibalulekile eCáceres.
Izindawo ezihamba phambili ongazivakashela
Idolobha lezinkokhelo ezingama-4000 noma isiqhingi esiyintandokazi sikaMarco Polo lingezinye zezindawo ezinhle kakhulu ongazivakashela ngo-2019
Yini ongayibona kuRonda: amasiko, amabhuloho kanye nama-epic
Kusukela ku-Old Bridge obabazekayo kuya ezingxenyeni zalo zobuhle bamaMoor, kuningi ongakubona eRonda, elinye lamadolobha amahle kakhulu eSpain.
Amasiko ahlangana ne-gastronomy ukunika ama-pinchos aseBasque. Namuhla sikunikeza yonke idatha edingekayo ukuze uwele esilingweni sakhe.
Phakathi kwamadolobha amahle kakhulu alandelayo eSpain, sidlula emigwaqweni emhlophe yaseTeguise ukuqeda phakathi komhlanga eMayor de Chinchón ePlaza.
Ungayithola kanjani ilayisense yokushayela emhlabeni jikelele
Uma ucabanga ukuthi ungayithola kanjani ilayisense yokushayela yamazwe omhlaba, sikukhombisa izinyathelo okufanele uzithathe, kanye nemibhalo kanye nentengo yayo.
Ungayivuselela kanjani ipasipoti
Thola konke odinga ukukwazi mayelana nokuthi ungayivuselela kanjani ipasipoti yakho. Kusuka kuphi ukukwenza, imibhalo yokwethula kanye nentengo okufanele uyikhokhe.
INeuschwanstein Castle ingesinye sezivakashelwa kakhulu eYurophu. Ukubukwa kwayo okuhlaba umxhwele nesitayela sayo sothando kuzosiyisa esikhathini sezinganekwane
IPalacio da Pena ingelinye lalabo abavakashela ngaphezu kwesibopho. Itholakala eSintra, endaweni ephakeme lapho imvelo ihlangana khona nemibono ehlaba umxhwele nenhlanganisela yokwakhiwa. Indawo enomlando nokuthandeka okuningi ongeke wehluleke ukukuthola.
Amathempeli ase-Ayutthaya angolunye lolo hambo olubalulekile lokujabulela iPaki Yezomlando eligcwele amathempeli, izigodlo nezifanekiso ezibenyezelayo nezihlobana nezinye izikhathi. Uma uhlela ukuvakashela iThailand, ngeke ukwazi ukukhohlwa ngale ndawo.
Uma uhambela phesheya: Ukuzula noma ukukhokha i-SIM ezweni olivakashelayo?
Mhlawumbe ngumbuzo ophakamisa ukungabaza okuningi. Kokubili ukuzula noma i-SIM ekhokhelwa kusengaphambili kuyizinketho ezimbili lapho usohambweni futhi ukwazi ukuxhumana ne-inthanethi. Namuhla sithola okungcono kakhulu futhi okubi kunazo zonke izinketho zombili ukuze ukwazi ukunquma ngokushibhile futhi okukufanele kakhulu.
Izinhlelo zokusebenza nezinsiza ezingeke zashoda kuselula yakho lapho usohambweni
Sibuyekeza izinhlelo zokusebenza nezinsiza ezidingwa iselula yakho lapho sithatha uhambo. Indlela yokuthwala konke okudingayo ukuze ungabi nankinga, futhi singajabulela lezo zinsuku zokuphumula okufanelekile kahle. Thola ukuthi yini okudingeka uyenze!
Siveza zonke izimfihlo ezingafihlwa yiThe Valley of the Fallen. Ngakho-ke, ukuvakasha kwakho kuzoba okukhetheke kakhulu. Ihlelwe njengeyinkimbinkimbi enkulu, enomlando omningi wezepolitiki ngemuva kwayo. Namuhla, sekuyindawo yokuhlangana yezinkulungwane zezivakashi.
Indawo Engcwele yeBien Aparecida
Namuhla singena eSanctuary yeBien Aparecida. Indawo yokukhonzela eneminyaka eminingi yomlando futhi yaqedwa ngokuba yiPatron Saint of Cantabria. Indawo yokuhlangana yabahambeli nabavakashi abangafuni ukuphuthelwa ubuhle bendawo.
Sibuyekeza ama-Catacombs aseRoma. Kusukela ekuqaleni kwayo kuya kulabo abavakashelwe kakhulu futhi, nayo yonke imininingwane yokwazi ukwenza lolu hambo, olungeke ulibaleke. Thola konke okudingayo ukuze ujabulele elinye lamaphuzu abaluleke kakhulu eRoma.
Sibuyekeza amasimu amahle kakhulu eBarcelona. Izilungiselelo ezinhle ezigcwele ukunethezeka, imvelo nokuzijabulisa okuningi. Iningi labo lisivezela umculo obukhoma, lisivumela ukuthi sijabulele ama-tapas noma ama-cocktails amangalisa kakhulu. Amakhoneni wedolobha okufanele awazi.
Amasimu amahle kakhulu eMadrid
Sihamba ngezinyawo emasimini amahle kakhulu eMadrid. Izindawo zokungcebeleka lapho ungajabulela khona isiphuzo noma i-tapas nabangani. Izindawo zokukhulekela zabantu basemadolobheni kanye nezivakashi.
Umnyuziyamu washokolethi ungenye yezindawo esingenakuphuthelwa kuzo. ESpain sinamakhona amaningi walolu hlobo. Ukuhamba okumnandi ngendaba enhle. Uke wavakashela noma ikuphi?
Uma sikhuluma ngokuvakasha eCristo Rey, kufanele sikhulume ngeCerro del Cubilete. Indawo enomlando, ngokuzinikela nangokubukwa okumangazayo.
Kungani ibizwa ngokuthi iBarrio Húmedo?
Beka phansi izambulela, ukhohlwe izigqoko namabhantshi, lokhu akuhlangene nesimo sezulu. Umakhelwane…
Idiphu ebhishi lokuzenzela laseParla
Ngokufika kwehlobo, enye yezinto esingayifuna kakhulu ukuthatha idiphu enhle ...
Thola izimayini zikasawoti ezaziwa nangokuthi i-cathedral kasawoti engaphansi komhlaba. Zitholakala edolobheni lasePoland iWieliczka.
Resolí iresiphi, isiphuzo esivamile seCuenca
I-resolí isiphuzo esijwayelekile kakhulu seCuenca futhi esisiza kakhulu ukujabulela okwendabuko kakhulu ukuthi ...
Ungaphuthelwa yikho konke lokho okunikezwa yi-Wall of Lugo. Kusukela kumlando wayo kuya kukho konke okuhlanganisa ngaphakathi, kufanelekile ukuvakashelwa.
Inqaba yase-Almodóvar del Río
Inqaba yase-Almodóvar del Río isithatha ukuze siphile okuhlangenwe nakho okuningi. Vele, konke kusuka kwenye inkathi lapho izinganekwane zingukuhleleka kosuku.
Patios de Córdoba, ubuhle besiko
Thola ukuthi ziyini iPatios de Córdoba, kanye nomncintiswano obanjwa minyaka yonke nalapho ungabona khona izinhlobo ezahlukene zalesi siko sasendulo.
UDulce Ourense, ama-dessert acebile futhi ajwayelekile kakhulu
Izitsha eziningi ezaziwa kakhulu e-Ourense zinosawoti, ngokususelwa kungulube, iwundlu noma i-octopus; kodwa…
Sikulethela isifinyezo ngamasiko athandwa kakhulu eVenezuela: imidanso yayo, njengeJoropo, ngaphezu kwamasiko, izingoma nokuningi!
I-tatami yaseJapan: ubuciko bokulala phansi
I-tatami yaseJapan ingesinye sezici eziphawuleka kakhulu ezweni laseJapan futhi, mhlawumbe, enye yezinto ezingaqondakali kangako ngabantu baseNtshonalanga.
Iziphuzo ezijwayelekile okufanele uziphuze eLondon
Thola ukuthi yiziphi iziphuzo ezijwayelekile zaseNgilandi, siyini isiphuzo esijwayelekile saseLondon? Sikutshela lapha ukuthi isiphuzo sesiNgisi siphuzani.
Izitsha ezijwayelekile zesifunda sase-Amazon
Ukuhlanganiswa nezitsha ezinhle kakhulu ukujabulela ngokugcwele i-gastronomy yendawo yase-Amazon. Izitsha zabo ezingavamile zizokumangaza!
Uyasazi isidlo sasekuseni sesiNgisi? Amaqanda athosiwe, ubhekeni, amasoseji, utamatisi othosiwe ngezinye zezithako zawo. Uke wakuzama?
Imvunulo ejwayelekile yaseColombia
Thola zonke izimfihlo zemvunulo ejwayelekile yaseColombia yaseSanjuanero Huilense, isiko elijwayelekile laseColombia elizokumangaza ngokuhlobisa kwalo
I-India eminyakeni ephakathi
Ibinjani iNdiya ngeNkathi Ephakathi? Ubukhosi bakwaGupta iminyaka engamakhulu amabili buhlanganisa lonke elaseNdiya ngaphezu kokuthola i-apogee enkulu. Ngabe ufuna ukuhlangana naye?
Umculo wendabuko waseRussia nezingubo ezijwayelekile zaseRussia
Imininingwane mayelana nemvunulo ejwayelekile yaseRussia, umlando wayo, amaphethini wombala nokuningi. Babegqoke kanjani ukujabulela umculo wendabuko waseRussia?
Izitsha ezijwayelekile zesifunda seCaribbean
Thola izimfihlo zeCaribbean gastronomy futhi ungaphuthelwa lokhu kuhlanganiswa okumnandi kwezitsha ezijwayelekile ezivela esifundeni seCaribbean.
Izibani zaseNyakatho eNorway, umbukwane wombala
Ukubona amalambu aseNyakatho eNorway kuba yintokozo kulabo abaya ngaphesheya kwe-Arctic Circle eqhuma ngombala.
Izitsha ezijwayelekile zesifunda sase-Andes
Thola izimfihlo zezitsha ezijwayelekile zesifunda sase-Andes kanye ne-gastronomy yayo. Yikuphi ukudla okujwayelekile kwesifunda sase-Andes kanye nale ndawo yaseColombia?
Thola amasiko abaluleke kakhulu eVenezuela. Uyazi ukuthi imaphi amasiko aseVenezuela ahluke kakhulu? Thola!
I-Roman Colosseum: umlando nobukhazikhazi eMzini Ongunaphakade
Iminyaka eyizinkulungwane ezimbili yomlando ingena kwiColosseum yamaRoma obukhazikhazi bayo nezinsalela ziqhubeka nokuhlonipha igama lesibili laseRoma loMuzi Waphakade.
IColombia inokuhluka okuhlukile kwamasiko, uma ufuna ukwazi isiko laseColombia ngokujula, ungaphuthelwa ukuhlaziywa kwethu kulesi sifunda esithandekayo
Izingubo zamadoda amaHindu
Ukuhlanganiswa nengubo ejwayelekile kakhulu yamaHindu, izingubo nezimvunulo zamadoda. Kusuka eKhalat yendabuko, kuye eChuridar yesimanje yaseNdiya
Ubuciko bendabuko baseJapan
Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngobuciko bendabuko baseJapan? Sichaza zonke izimfihlo zamasiko namasiko aseJapan
Yonke imininingwane ngemikhosi emihlanu ebaluleke kakhulu eVeracruz: umbukiso wekhofi, umkhosi womkhosi, iNaolinco noma umbukiso wePrimavera. Uyabazi?
Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngamasiko aseCuba? Sikukhombisa zonke izimfihlo zamasiko aseCuba: amasiko, i-gastronomy, amaqembu, ezemidlalo nokuningi
Iphathi eParis: izindawo ezihamba phambili
Ukuhlanganyela eParis ngezindawo ezinhle kakhulu kuqinisekisa amandla, ezokungcebeleka nokuhluka kwenhlokodolobha yaseFrance.
IPortugal izwe eliyingqayizivele ongalihambela, kepha akukho okungcono kunokwazi amasiko alo ukulijabulela ngokugcwele futhi wazi ukuthi isiko lamaPutukezi linjani.
Ingubo yesiDashi, kunjalo
Sikulethela zonke izimfihlo zezingubo zendabuko zaseDashi: ama-clogs adumile noma i-komplen, imvunulo yendabuko nokuningi
Izindawo ezi-7 ezimibalabala kakhulu e-Afrika
Ukusuka emadolobhaneni aseNingizimu Afrika anezingqondo ze-psychedelic kuya ezingadini eziluhlaza okwesibhakabhaka zaseMarrakech, lezi zindawo eziyi-7 ezinemibala e-Afrika zizokunqoba.
Izinsuku ezibalulekile namaholide eMorocco
Ngabe ufuna ukwazi yonke imininingwane yemikhosi ebaluleke kakhulu eMorocco? Sikukhombisa imikhosi emikhulu yaseMorocco nezinsuku
Amasiko namasiko omphakathi wamaPutukezi
Sikukhombisa amasiko namasiko amakhulu ePortugal, sidlula kwezobuciko, i-gastronomy, imikhosi nobuciko bamaPutukezi.
Amadolobha ayishumi amahle kakhulu eMorocco
Uma uzovakashela iMorocco, ungaphuthelwa umhlahlandlela wethu wokuvakashela amadolobha amahle kakhulu ayi-10 eMorocco, njenge-Ifrane, Fes noma iMarrakech
Izingadi ezi-5 zaseMarrakech okufanele wazi
Lezi zingadi ezi-5 zaseMarrakech okufanele wazi ukuthi zivusa inkanuko, umbala kanye nokuqabuka kwesiko elingenakuphikiswa ngokuphelele laseMorocco.
Yini ongayibona eDominica, eCaribbean yekusasa
Izimpophoma zamaphupho, amadolobhana okudoba kanye nezintaba-mlilo eziqhakazile ziyahlangana esiqhingini saseDominica, iCaribbean yekusasa, i-ecotourist nemfihlo.
Isikhathi esihle sokuvakasha eNorway
Uma uhlela ukuya eNorway, ungaphuthelwa umhlahlandlela wethu ukuthola ukuthi yiziphi izinyanga ezinhle kakhulu zokujabulela le ndawo eyingqayizivele
Inkolo eGibhithe yanamuhla
Inkolo yaseGibhithe ihlale ibusa izimpilo zabantu bendawo. I-Islam iyona enamandla kunazo zonke, ngemuva kobuKristu nobuJuda. Sichaza konke lapha
Izimpande zezibongo zase-Ireland
Sichaza izimpande nokuqala kwezibongo zase-Ireland nokuthi yimaphi amagama nezibongo ezisetshenziswa kakhulu e-Ireland
Vakashela amabhishi aseGoa, eNdiya
Endaweni ethile ogwini olusentshonalanga yeNdiya, amabhishi aseGoa aqhubeka nokukhuthaza amathonya amaPutukezi, i-exoticism, nentelezi yama-hippie.
Imithetho yokuziphatha eJapan
Ukuhambela eJapan kuyinto engalibaleki, yize kufanele ucabangele imithetho yokuziphatha kanye neprotocol yaseJapan
Ukudla okujwayelekile kweQuerétaro
Ngabe uvakashela iQuerétaro futhi ufuna ukujabulela ukudla okujwayelekile kweQuerétaro? Ungaphuthelwa izindlela zalo zokupheka okumnandi kanye ne-gastronomy ejwayelekile lapho.
Izinto ozozibona nokuzenza ePortugal
Kunezinto eziningi ongazibona futhi uzenze ePortugal, sikukhombisa izindawo ezibaluleke kakhulu ongeke uziphuthe ohambweni lwakho
Ukudla kwaseMorocco, izici nezitsha ezidumile
Kusukela ekunambithekeni kwendabuko okubabayo nokubabayo kuya koshukela neminti, kungokunambitheka kwesici okunye ...
I-Gastronomy ku-ilavila: awukwazi ukuphuthelwa yilezi zitsha
Uma uzovakashela i-Ávila awukwazi ukuphuthelwa i-gastronomy yayo enhle kakhulu, ikakhulukazi uma ungumthandi wenyama newayini elimnandi.
Isidlo sasekuseni esijwayelekile saseSweden
Ubuwazi ukuthi kukhona iresiphi ejwayelekile yaseSweden yokudla kwasekuseni efaka ubhiya? lokhu neminye imininingwane yezindawo zokudla kwasekuseni ezijwayelekile eSweden
Amabhishi angu-8 emhlabeni akhanya ebusuku
Umphumela owaziwa ngokuthi yi-bioluminescence uvumela lawa mabhishi ayisishiyagalombili omhlaba akhanya ebusuku ukuba abe yiqiniso
Izingubo zendabuko zaseDashi
Phakathi kwezingubo zendabuko zaseDashi, ama-clogs abo aziwayo avelele, kepha sikukhombisa zonke izembatho zendabuko zamaDashi
Ezinye izici ezijwayelekile zamafjords aseNorway
Ama-fjords aseNorway ayizindawo ezihlukile ezivikelwe yi-UNESCO. Sikukhombisa izici zayo ezibaluleke kakhulu
Ngabe ufuna ukwazi wonke amasiko namasiko omphakathi waseNorway? ungaphuthelwa le ndatshana lapho siveza khona konke amasiko abo
Polska, umdanso kaSathane
Sembula zonke izimfihlo zeSweden Polska, umdanso okuthiwa udeveli: umlando, isiko nezinhlobo ezahlukahlukene zepolska
INorway ingelinye lamazwe ahamba phambili ukuhlala. Futhi uma ufuna ukukujabulela ngokugcwele, awukwazi ukuphuthelwa imikhosi emikhulu yabantu baseNorway
Amabhishi amahle kakhulu ePortugal ongavakashela
Enye yezinto eziheha kakhulu ePortugal amabhishi ayo, ngakho ngezansi sizokukhombisa amabhishi amahle kakhulu ePortugal
Amasiko nemikhuba ejwayelekile yama-Irish
Uma uzohambela e-Ireland, akukho okungcono kunokufunda ngamasiko namasiko ajwayelekile abantu base-Ireland. Lokho akuyona yonke into eseSuku lukaSt.
Izindawo eziyi-10 eNingizimu Melika okufanele uzibone kanye empilweni yakho
ISalar de Uyuni noma iMachu Picchu ngezinye zezindawo eziyi-10 eNingizimu Melika okufanele uzibone kanye empilweni yakho.
Izidingo zokungena eNorway
Uma ufuna ukungena eNorway, kokubili ukusebenza nokuhamba, lezi yizidingo eziyinhloko okufanele uzifake: imibhalo, ama-visa ...
Yiziphi iziqhingi ezinkulu zaseJapan?
IJapan izwe elakhiwe ngeziqhingi ezingaphezu kwezi-6.800 XNUMX, kepha iziqhingi ezibaluleke kakhulu kulo lonke elaseJapan ngokungangabazeki iShikoku, iKyushu, iHonshu neHokkaido.
Uma uhlela ukusebenza eNorway
Sikulethela amathiphu amahle kakhulu uma ufuna ukufuna umsebenzi eNorway: izingosi ezinhle kakhulu zokusebenza, imininingwane ngezwe, imali ...
IBraga, elinye lamadolobha amahle kakhulu ePortugal
IBraga ingelinye lamadolobha amahle kakhulu ePortugal njengoba inochungechunge lwezikhumbuzo zomlando ezimangazayo ongeke uziphuthe.
Amaqiniso ajabulisayo ngeHolland
Ubuwazi ukuthi i-Amsterdam inamamyuziyamu amaningi emhlabeni? lamaqiniso athanda ukwazi ngeHolland azokumangaza
Iziphuzo ezintathu ezijwayelekile zase-Ireland
Ikhofi lase-Ireland noma i-Irish Coffe ngesinye seziphuzo ezintathu ezijwayelekile e-Ireland, kodwa ngabe uyazi ezinye iziphuzo ezimbili ama-Irish azijabulela kakhulu?
Umthombo iTrevi, umthombo omuhle kakhulu e-Italy
Ukubuyiselwa kwakamuva koMthombo iTrevi kuba yisizathu esanele sokuvakashela iRoma futhi kulo nyaka.
Izimangaliso zemvelo eziyi-7 zase-Ireland
I-Ireland igcwele izimangaliso zemvelo. Futhi kunezindawo ezithile, njengexhaphozi i-Allen noma i-El Burren eyenza i-Ireland indawo ehlukile
Amaphiramidi ayishumi abaluleke kakhulu eGibhithe
Lawa ngamaphiramidi ayishumi abaluleke kakhulu eGibhithe. Uchungechunge lwezikhumbuzo zikazwelonke ezaziwa kakhulu ongeke uziphuthe eGibhithe
Izinto eziyi-10 okufanele wazi ngaphambi kokuya eNdiya
Lezi zinto eziyi-10 okufanele wazi ngaphambi kokuya eNdiya zizoba wusizo kakhulu ezweni le-curry, iTaj Mahal nezinkomo ezingcwele.
I-Italy nemizi yayo eyi-10 ebaluleke kakhulu
Lawa ngamadolobha ayi-10 abaluleke kakhulu e-Italy: iRoma, iMilan, iFlorence, iVenice namanye amadolobha ayizimpawu ezweni elidumile le-pasta
Ugqoka nini i-saree? Kusuka kusiphi isifunda izingubo ezijwayelekile zaseNdiya? Sembula zonke izimfihlo zezingubo zamaNdiya nezingubo zamaHindu.
Izimbali nezilwane zoMfula iNayile
Imininingwane ngezilwane nezitshalo ezihlala eMfuleni iNayile, engenye yezinto ezinkulu kakhulu emhlabeni futhi enomcebo ohlukile wezinto eziphilayo
Izindawo eziyi-8 zabavakashi abasafufusa
Lezi zindawo eziyisishiyagalombili zabavakashi abasafufusa ziqinisekisa lezo zimo eziningi okusamele sizithole eminyakeni ezayo.
Ukuqanjwa Okubalulekile KweNdiya
Ubuwazi ukuthi i-chess yasungulwa eNdiya? Kule ndatshana siveza izinto ezisungulwe ezibaluleke kakhulu e-India, futhi ezingaphezu kweyodwa zizokumangaza
Izitsha eziyi-9 nje ezingenakuphikiswa zaseNingizimu Melika
Amakholori, ubhanana oluhlaza noma inhlanzi eluhlaza yizinto ezithile zalezi zitsha eziyi-9 ezingamane zivinjelwe izitsha zaseNingizimu Melika
8 amadolobha ebukekayo emhlabeni wonke
ILabyrinths yobuciko basemadolobheni, imigwaqo eluhlaza okwesibhakabhaka noma izindlu ezinemibala ngezinye zeziphakamiso ezifakiwe kula madolobha amahle emhlabeni jikelele.
Iminikelo yaseNdiya emhlabeni
Okunikelwe kakhulu eNdiya emhlabeni: izibalo, isayensi, izilimi nokwakhiwa kwezakhiwo. Sikutshela ukuthi kungani.
Izindawo eziyi-10 e-Afrika okufanele uzivakashele kanye empilweni yakho
Lezi zindawo eziyi-10 e-Afrika zihlanganisa amazwekazi ahamba phambili ezwenikazi elikhulu kunawo wonke emhlabeni: izintaba-mlilo ezinkulu, iziqhingi ezinjengamaphupho kanye nemizi yasendulo.
Konke mayelana nokufuna ukwazi ngesiko lamaNdiya namaqiniso athakazelisa kakhulu ngesiko lamaNdiya, umphakathi oyingqayizivele ozokumangaza.
Ngabe ufuna ukwazi indaba ngemuva kweMatryoshka, udoli owaziwa kakhulu waseRussia ohlukaniswe waba yizicucu? lapha sikutshela zonke izimfihlo zalo msebenzi onelukuluku
Iziqhingi eziyi-8 kufanele uvakashele okungenani kanye empilweni yakho
Kulezi ziqhingi eziyi-8 okufanele uzivakashele okungenani kanye empilweni yakho sithola amanye amapharadesi abaluleke kakhulu e-Asia noma eCaribbean.
Ukubaza kwamaShayina, izinto zokwakha kanye namasu okukhiqiza
Umfanekiso waseChina ubonakala ngokusebenzisa izinto ezahlukahlukene, ezifana nezinyo lendlovu noma ubumba. Lapha sikukhombisa zonke izimfihlo zokwenziwa kwalo
10 Igugu le-Unesco elingaphatheki
Lezi zindawo eziyishumi ezimangazayo ze-Unesco ezingaphatheki zivela emibala yaseMexico ziye eyoga ngeFallas yaseValencia.
I-Bandeja paisa, lesi yisidlo esijwayelekile kakhulu eColombia
IBandeja Paisa yisidlo esijwayelekile kunazo zonke eColombia futhi sikukhombisa zonke izimfihlo zayo: izithako, indlela yokupheka nomlando wale recipe emnandi
Ezinye izici zamaShayina
Uma ufuna ukwazi izici zamaShayina, njengezindlela zawo, ukwenza noma isiko lawo elihehayo, qhubeka ufunda ukuze wazi zonke izimfihlo zawo
Izindawo ezithakazelisayo e-Italy
Izindawo ezithakazelisayo zokuvakashela ohambweni oluya e-Italy. Izindawo ezinesithonjana esifana neRoma, iSicily, iFlorence nokuthi uzothola ini kulowo nalowo.
Amakhona ayimfihlo e-Amsterdam ... okungaziwa muntu
Ngikisela ukuthi uthole amanye amakhona e-Amsterdam angaphandle, noma angavakashelwa izivakashi kangako ... qhubeka usitshele ukuthi ucabangani.
Izintshisakalo zaseGibhithe zezingane
Umlando kanye nezifiso zaseGibhithe ukutshela izingane. Uma kwenzeka uthola ithuba, hamba nabo uye eGibhithe.
Ukudla Okungajwayelekile eHong Kong
I-Hong Kong, edume ngokudla kwayo okungajwayelekile, ekhonza kusuka enyameni yegundane emigwaqweni, kanye nezithelo nemifino engaziwa emazweni amaningi ase-Europe
Ukwenza ubufebe kube semthethweni eNetherlands, kunjalo
Ukudayisa ngomzimba kwavunyelwa ngokusemthethweni eNetherlands ngo-Okthoba 1, 2000 lapho kususwa ukuvinjelwa kwamafele kusukela ngo-1911.
Umlando waseshashalazini waseVenezuela
Uma ufuna ukwazi umlando wetiyetha yaseVenezuela, ungaphuthelwa yilokhu kuhlaziywa okuphelele lapho siveza khona zonke izimfihlo zeshashalazi eVenezuela
AmaNooks eHolland kufanele ugcine imfihlo
Ngikhethe amakhona amane ukuthi uma okokuqala ubuseHolland ungazange uye, awukwazi ukulahleka ekuhambeleni kwakho kwesibili ... noma okwesithathu.
Amapaki wokuzijabulisa amahle kakhulu eMelika
amapaki wokuzijabulisa amahle kakhulu eMelika. Ake sibazi. IDisneyland, eCalifornia e-Anaheim, eCalifornia ephethwe yiThe Walt Disney Company
Imizila ehamba phambili yezithuthuthu e-United States
Ngemuva kokuqasha i-motorhome, ngokunyathela inhlabathi yaseMelika uzobe ukhululekile ukuhamba nokushayela uye ezindaweni ezinhle kakhulu
Amahhotela ahamba phambili ePorto
Noma ngabe isabelomali sakho sinqunyelwe futhi ufuna ukuzitotosa noma uma uhamba ngaphandle kwezinkinga zemali, qaphela amahhotela amahle kakhulu ePorto
IGenever, i-Dutch gin, ukuphuza yodwa (kepha ngokubambisana)
IGenever noma iJenever yi-Dutch gin ejwayelekile. Inenqubo yokukhiqiza ehluke kakhulu eLondon Dry, futhi inokuqukethwe okuncane kotshwala.
Okuhamba phambili kweHong Kong, njengeSingapore
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-16 selokhu iHong Kong yazimela kumaNgisi. Kepha idolobha liyaqhubeka nalokho ...
Jabulela i-Chinese Lantern Festival eVienna
USepthemba yinyanga yamaShayina eVienna, ungaphuthelwa amalambu amakhulu amaShayina eDanube Island!
Ngaphandle kwempilo eGrisi lasendulo
AmaGreki asendulo ayecabangani ngokufa?
IHolland, izwe elidla ikhofi kakhulu, ngukuthi kungani lizoba baningi kangaka?
INetherlands ihamba phambili ohlwini lwamazwe adla ikhofi kakhulu eYurophu. Ngokwezibalo, wonke umuntu waseDutch uphuza izinkomishi ezimbili nengxenye zekhofi ngosuku.
Ithiphu eCuba, yebo noma yebo
Ngabe ithiphu isele eCuba? Futhi uma kunjalo, kungakanani? Konke kuncike!
Ungadlani eLondon ngemali encane
Yize idumela layo lokuba idolobha elibiza kangaka, sikwembulela izindawo ezinhle kakhulu eLondon zokudla nokujabulela isipiliyoni esingabizi kakhulu sokupheka
Yazi izindawo ezi-6 ezinhle kakhulu e-Italy
I-Italy kufanele ibe yaphakade, kepha senze ukhetho olubalulekile ukuze wazi izindawo ezi-6 ezinhle kakhulu e-Italy.
I-cathedral yebhola eNgilandi, inkundla yezinganekwane yaseWembley
Uma ungumlandeli webhola, wake wakucabanga ukuvakashela inkundla yezemidlalo yaseWembley, leyo nkundla eye yabona ukuhlangana okuningi
Buphi ubusuku obuhle kakhulu eShanghai
IShanghai inobusuku obuhle kakhulu e-Asia ngakho-ke nazi izeluleko zokuyithokozela ngo-100%.
Iziphuzo ezingezona ezidakayo zamaGrikhi
Uma uya eGrisi futhi ungabuthandi utshwala kepha iziphuzo ezinempilo, ungakhohlwa ukuzama lawa manzi ajwayelekile aseGrikhi kanye nokufakwa ngaphakathi.
Ifulegi lase-Austria, isizathu semibala yayo
Uyazi ukuthi kungani ifulegi lase-Austria libomvu futhi limhlophe ngenkathi i-Habsburg crest yayimnyama nephuzi?
Umlando, isiko kanye nomlando, izici zaseRoma
Sizokwethula ingxenye yenganekwane namasiko aleli dolobha elihle, imisebenzi lapho izivakashi kufanele zibambe iqhaza ukujabulela iRoma
Yini ongayinikeza isiShayina nokuthi yini ongayiniki
Uma uhambela eChina, kufanele unake le mithetho mayelana nokuthi yini okufanele unikeze nokuthi yini ongayiniki. AmaShayina ayinkimbinkimbi!
I-Italy, ithiphu noma cha
Uyazi ukuthi e-Italy kufanele ushiye ithiphu? Lapha ngikushiya kuphi, nini futhi ngani.
Ithiphu e-Ireland, ukushiya noma ukungahambi
Ingabe uya e-Ireland? Uyazi ukuthi kufanele ushiye ithiphu noma cha? Nakhu lapho futhi unganikeza khona ithiphu e-Ireland.
Ingabe ithiphu isele eChina? Kujwayelekile? Kuphi, ezimweni eziningi? Uma uya eChina, bhala phansi lolu lwazi olusebenzayo.
Changelings, Fairies ukweba izingane
Uyazi ukuthi ama-Irish asendulo ayekholelwa ezidalweni ezibizwa ngokuthi izinguquko?
UDublin ukhumbula iMvukelo yase-Ireland yango-1798
Uma useDublin ungawazi umlando Wokuhlubuka kuka-1798.
IPortugal kanye nomgodi wokuqalisa eSintra
ISintra yidolobhana lamaPutukezi elisesifundeni iLisbon. Singayichaza njengendawo yemilingo, egcwele izimfihlakalo
Ukuvakashela eCathedral yasePisa, eRomanesque nasenkathini ephakathi
Uma uzobona uMbhoshongo wasePisa, kungani ungavakasheli neCathedral enhle yasePisa? Kuyisonto elihle lasendulo.
Ukudla kwendabuko kwase-UK
Umhambi othanda ezokuvakasha nge-gastronomic, uzwile ukuthi amaBrithani awadumile ncam ngokuba nokudla okumnandi kepha akunjalo
England amasiko namasiko
Ngamasiko namasiko aseNgilandi, ahlukile, ngezansi sikuqoqela amasiko abaluleke kakhulu kuleli zwe.
Iminyuziyamu emihlanu ephezulu eBeijing
Uma uya eBeijing kuleli hlobo, qiniseka ukuthi uvakashela iminyuziyamu enhle kakhulu, ayilibaleki!
Thola izintelezi ozozijabulela eFrance
IParis inikeza izinkambo zemvelo nezinketho zamasiko unyaka wonke.
Ezolimo zemvelo eNetherlands umkhakha ochumayo
Ukulima ngokwemvelo eNetherlands kunekhwalithi yomkhiqizo omuhle kakhulu, inani elifanele lemali nokuhlela nokwethenjelwa kwempahla.
Ama-abbeys amathathu amahle asendulo eTuscany
Uma uya eTuscany, qiniseka ukuthi uvakashela lezi zindawo ezintathu zasendulo zasendulo. Uzoyithanda!
Izindawo zokudlela ezine ezingabizi futhi ezinhle ongazidla eGalway
Ngabe uya eGalway? Yidla okumnandi ngaphandle kokuchitha imali eningi kwenye yalezi zokudlela.
Iminyuziyamu ehamba phambili eLondon
Uma ungumthandi wemnyuziyamu, uzothanda ukuvakashela amakhulu eminyuziyamu ongakhetha kuyo ...
Thola amanxiwa eHerculaneum, idolobha elingcwatshwe yiVesuvius
Thola izimangaliso zeHerculaneum, idolobha laseRoma elangcwatshwa emakhulwini eminyaka adlule ngentaba-mlilo iVesuvio
Imikhakha yezomnotho yasePeru
IPeru ihlomule ngokukhula okuhle iminyaka eyi-10, kepha kufanele ibhekane nezinselelo eziningi, njenge ...
Lunjani uHlelo Lwezempilo ePortugal
Uhlelo lwezempilo lwasePortugal luhlukile kwamanye amazwe ngomqondo wokuthi lapha unayo ...
Uyayikhumbula idrarhma, imali yaseGrisi?
Idrarhma kwakuyimali yaseGrisi yaze yamukela i-euro ngo-2002
Suka eLondon uye eBelfast, uwele ulwandle yebo noma yebo
Lezi izindlela zokusuka eLondon uye eBelfast, ngesikebhe, ngendiza, ngesitimela nangebhasi
Ukuvakasha kwemvelo eNgilandi
Namuhla siphakamisa ukuthola indawo yakudala ngenye indlela, ngoba leli zwe linobuhle obukhulu bemvelo obulungiselelwe ...
Amasiko nemikhuba yama-Easter eNetherlands
EHolland kuyiholidi kuphela ngePhasika ngeSonto nangoMsombuluko, futhi abanamlingiswa wenkolo ophawuliwe. Izingane zijabula "nokuzingelwa kwamaqanda".
Izinketho ezintathu zokuhamba ngodonga olukhulu
Indlela enhle yokwazi iGreat Wall ukuyihamba ngakho unganqikazi ukubhalisela izinkambo zokuhamba izintaba, zingcono kakhulu!
Njengoba ithathwa njengelinye lamazwe amakhulu e-United Kingdom, iNgilandi inezindawo ezahlukahlukene zezivakashi ...
Izithelo ezinhle kakhulu ePeru
Umcako unombala ofanayo nolamula oluhlaza okotshani, kepha une-asidi kakhulu, evumela ukuthi isheshise ...
Amagilebhisi akhula ogwini lwasePeruvia eningizimu yeLima, futhi asetshenziselwa ukukhulelwa iwayini futhi ...
Amafilimu amahlanu okuqonda i-Ireland
Qiniseka ukuthi ubuka lawa mafilimu amahlanu akhuluma nge-Ireland ngoba azokusiza ukuthi wazi futhi uqonde leli zwe elihle.
Ukusikeka okuhle kwenyama yase-Argentina
Ukunambitheka kwenyama yase-Argentina kudumile emhlabeni wonke futhi lokhu akwenzeki ngengozi ngoba kukhona ...
Kancane kwe-gastronomy yaseSwitzerland
Kunzima ukubhekisa kuhlobo lokudla kwendabuko kwaseSwitzerland, ngoba isiko lalo lokupheka liqukethe ezintathu ...
Yimaphi ama-cocktails athandwa kakhulu e-Austrian?
Hlangana futhi uphuze ama-cocktails amahle kakhulu e-Austria
Ama-cocktails amane amahle kakhulu e-Italy
Ungayishiyi i-Italy ngaphandle kokuzama ama-cocktails ayo akudala kakhulu, aqabulayo futhi amnandi!
UKylix, ingilazi yewayini yamaGrikhi asendulo
Yini i-kylix? Inkomishi eyayisetshenziswa ngamaGrikhi asendulo ukuphuza iwayini.
Umsuka nezici ezithile zohlobo lweHeineken
IHeineken ingenye kabhiya obaluleke kunazo zonke emhlabeni, futhi manje ngifuna ukukutshela ukuthi kwenzeka kanjani nokuthi ezinye izici zayo.
Izibani zaseNyakatho zavela phezu kwe-Ireland
Noma kungamangalisa kanjani, iLights Lights yavela ngaphezulu kwe-Ireland
Yini ongayibona esithangamini samaRoma, isimangaliso seRoma
Uma uvakashela iRoman Forum, ungaphuthelwa amanxiwa ala mathempeli nezakhiwo.
Imuphi umculo ozwakalayo eGibhithe
Ngabe uhlela ukuhamba nezwe lamaFaro, kepha ufuna ukwazi ukuthi imuphi umculo ozwakala eGibhithe? Ngena sizokutshela konke.
Okufanele ukulethe ipotimende lakho lokuhambela eGibhithe
Awuqinisekile ukuthi uzopakisha ini esikhwameni sakho sokuhamba usiya eGibhithe? Ungakhathazeki. Faka sizokutshela lezo zinto ezizosiza kakhulu lapho uhlala khona.
Holland, umphakathi wamaphayona ekwamukelweni komzali oyedwa
INetherlands iyiphayona uma kuziwa ekunikezeni ilungelo lokutholwa kwabangqingili, ngo-Ephreli 2001 umthetho waqala ukusebenza, oyisibonelo kwamanye amazwe.
Vakashela iSonto LaseSanta Maria presso San Satiro, igugu leMilan
Uma useMilan, qiniseka ukuthi uvakashela i-Iglesia di Santa María endala yaseSan Satiro, eduzane neCathedral.
Ukuvakasha kwezindawo zabavakashi e-England
Ukuvakashela izwe elingelona elethu kungaba nzima kakhulu, kunezithiyo eziningi okufanele sizinqobe, kusuka ...
Umdanso wokufunda eNew York
Emigwaqweni yaseNew York ungaphefumula ubuciko, amandla, umbala, umculo, okungajwayelekile. Vele, ngesikhathi ...
I-Carrot Cake, ikhekhe elijwayelekile lesiNgisi
Amakhekhe esanqante abuyela emuva eNkathini Ephakathi. Ngaleso sikhathi, okokunandisa kwakubiza futhi izaqathe, ngokwemvelo ...
Yiziphi iziphuzo ezijwayelekile zaseGibhithe?
Awuqinisekile ukuthi ungakuphelezela kanjani ukudla kwakho? Oda iziphuzo ezijwayelekile zaseGibhithe futhi ungajabulela ukunambitheka kwendabuko kweZwe looFaro.
Izikebhe ezindlini zase-Amsterdam, enye indlela yokuhlala edolobheni
Emigodini engu-165 yase-Amsterdam kunezikebhe eziyizi-2.500 XNUMX ezihlala imindeni, imibhangqwana, abangane, amahhotela nemigoqo. Ungayeki ukuwavakashela.
Vakashela iSikhumbuzo kuVictor Emmanuel II
Ungavakashela iSikhumbuzo seVictor Emmanuel II eRoma ngoba lokhu kungenye yezindawo eziheha izivakashi ...
Yayinjani imfashini eGibhithe lasendulo?
Wake wazibuza ukuthi imfashini yayinjani eGibhithe lasendulo? Isigaba ngasinye senhlalo sasinezingubo zaso, kepha sasinaziphi izici? Thola.
ISorrento, indawo yezinganekwane eningizimu ye-Italy
Thola okuhehayo kweSorrento, iparele laseningizimu ye-Italy
Uhlu lwezindawo zamahhala zezivakashi e-Ireland
Sebenzisa amaLwesithathu amahhala ukuvakashela okuhle kakhulu kwe-Ireland
AmaShayina ayephethe ubuciko bethusi futhi asishiyela amagugu amakhulu
I-Ireland, amabhishi aphezulu angama-nudist
Yazi amabhishi amahle kunawo wonke e-Ireland
I-papyrus yenziwa kanjani
Iphepha laseGibhithe, i-papyrus, lenziwa ngesitshalo. Thola ukuthi i-papyrus yenziwa kanjani futhi umangaze obathandayo.
Abakwa-Unilever bazovula ifektri esiqhingini saseCuba
Abakwa-Unilever bazobuyela kwezokukhiqiza eCuba ngemuva kokugunyazwa ukwakha ubambiswano ngokuhlanganyela ne-Intersuchel kahulumeni. Abakwa-Unilever bazogcina iningi.
Amanye amafilimu akhuluma ngeGrisi lasendulo
Ungaphuthelwa noma yimaphi kulawa ma-movie nochungechunge lwe-TV olukhuluma nge-Ancient Greece noma izinganekwane zayo
I-Athene idolobha elingokomfanekiso, lelo lenkululeko, ubuciko nentando yeningi. Namuhla, leli dolobha lesimanje, eligcwele impilo, linikeza izivakashi zalo inqwaba yezinto ezihehayo, kufaka phakathi iminyuziyamu, izitolo ezahlukahlukene, izikhungo ezinhle zamasiko, izindawo zokudlela, izindawo zokucima ukoma, amasonto, izikhumbuzo nezakhiwo ezindala.
Isihlahla sikaKhisimusi saseRussia
Futhi yize izinto eziningi zehlukile kuKhisimusi waseRussia, isihlahla sikaKhisimusi siseseyinto esemqoka ekuhlobiseni
Izindawo ezihamba phambili zezithombe e-Athene
I-Athene yindawo ekahle yabathwebuli bezithombe abangakwazi ukudweba imifanekiso yezikhumbuzo zasendulo zaleli dolobha, amapaki amahle, nemigwaqo ebukekayo.
Abathenwa baseChina yasendulo
Abathenwa eChina yasendulo babebaningi futhi basebenza esigodlweni sasebukhosini
Yini ongayibona ngaphakathi kwesonto lama-Greek Orthodox
Hlangana nezinto ozozibona ngaphakathi kwesonto lama-Greek Orthodox
AmaGrikhi aphuza itiye lentaba
Itiye lasentabeni lidliwa kakhulu eGrisi, ukumnika okwenziwa ngamakhambi futhi kunezinto ezinhle zomzimba
I-Ireland, izwe elidla itiye kakhulu eYurophu
Abase-Ireland ngabaseYurophu abadla itiye eliningi, kuze kube izinkomishi ezine ngosuku
Isigodlo se-Countess of Revilla de Camargo, imnyuziyamu yobuciko
Isigodlo se-Countess of Revilla de Camargo sathathwa yi-Revolution futhi namuhla siyi-Museum of Decorative Art of Havana
Isango iBeulé, ukungena nokuphuma kwe-Acropolis yase-Athene
ISango iBeulé yisango lasendulo odongeni lwe-Acropolis yase-Athene
Ukwakhiwa kwamaphosta aseRussia kwakusetshenziswe njengendawo yokukhangisa esebenzayo nekhulu, kepha kuphela endaweni yaseSoviet lapho ukwakhiwa kwamaposta kwafinyelela khona ukubaluleka kwezepolitiki.
Ngoba ifulegi lase-Austria libomvu futhi limhlophe
ICollegio del Cambio, ubuciko bokunethezeka be-Renaissance ePerugia
Okunye ukuvakasha ePerugia yiCollegio del Cambio, uchungechunge lwamakamelo anobuciko be-Renaissance ePalazzo dei Priori
I-Basilica yasendulo futhi ekhazimulayo yaseSaint Constance
I-Basilica yaseSaint Constance ingelinye lamasonto amadala kakhulu eRoma
Ukuvakashela amadolobhana asePizarra kusho ukuvakashela amadolobhana angaba ngu-24 akhiwe ngalolu daba.
Uphondo lwe-Alpine luyinsimbi eyenziwe ngokhuni lwemvelo, ishubhu lemitha nohhafu noma ngisho nobude obuthathu, elinomlomo ophelile futhi oyindilinga.
IGrisi nepomegranati, izithelo zasebusika
Ipomegranate iyindlela ebusika eGrisi ethandwa kakhulu
Inkinga yezimoto eRoma idlulela ngalé kwesiminyaminya esijwayelekile.
ISanta Catalina, Isiqhingi Sezinkanyezi
ISanta Catalina kwakuyindawo eyayithandwa ngabenzi bamafilimu ukuqopha izigcawu ezingaphandle ezazidinga ukubukwa okuhle namathafa.
Sizokutshela ngezimbali zaseGibhithe, kanye nokusetshenziswa abaseGibhithe lasendulo abakunikeza ezinye zalezi zitshalo ezinhle. Zithole.
Ama-apula aseSwitzerland Anti Aging
Ama-apula aseSwitzerland alwa nokuguga ayizithelo ezake zakhiwa esihlahleni zithatha isikhathi eside kakhulu ukuguga
Izwe looFaro lizungezwe izingwadule ezinhle. Sikutshela ukuthi yiziphi izingwadule zaseGibhithe ukuze ungaphuthelwa neyodwa.
Bhuka amathikithi okubona iSidlo Sokugcina sikaDa Vinci
Ungabhuka kanjani amathikithi ukuze ubone iSidlo Sokugcina SikaDa Vinci.
Unjani umnotho waseNgilandi
Umnotho waseNgilandi ubonakala ngokuba ngumnotho oqinile futhi ohlanganisiwe njengomunye weminotho emikhulu emhlabeni
Izindawo ezihamba phambili zokuvakashela e-Nebraska
Izindawo ezinhle kakhulu ongazivakashela eNebraska yiHenry Doorly Zoo, i-zoo ekhangayo lapho kutholakala khona inani elikhulu lezilwane
Imizi emikhulu yaseGibhithe
Ngabe uhlela ukuya eZweni looFaro kodwa udinga ukwazi amadolobha amakhulu aseGibhithe? Uma kunjalo, ngena sizokutshela ngakho.
Imisebenzi kaMichelangelo eRoma
Imisebenzi kaMichelangelo ongayithola eRoma
Ukusekwa kwamayunivesithi ahamba phambili e-5 eNetherlands
Uma ufuna ukufunda eyunivesithi eHolland, ngizokunikeza abayisihlanu abaphezulu, ngokusho kwesikhundla seQS World University, ngiqale ngalelo elise-Amsterdam.
Amafilimu amahle e-Austrian cinema
Amanye amafilimu amahle kakhulu e-Austrian cinema
Amakhosikazi nezancinza, okukhombisa ngeChina lasendulo
Ifilimu ethi Wives and Concubines iyifilimu yaseChina edume kakhulu
IVenice inezinkinga ngezivakashi
IVenice inezinkinga ezinkulu ngezivakashi
IZorgvlied, amathuna adume kakhulu e-Amsterdam
Amathuna aseZorgvlied adume kakhulu e-Amsterdam, avulwa ngoNovemba 1, 1870. Omunye wabantu abadumile abangcwatshwe lapho nguBonye M.
Imidanso yabantu baseDutch, emisha namasiko
Izinganekwane nomdanso waseDashi, ikakhulukazi, kwaqhamuka ezigodini zasendulo ukujabulisa abantu ngemikhosi yabo. Bangabokudabuka eScotland naseJalimane.
Amathempeli abaluleke kakhulu eGibhithe
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yimaphi amathempeli abaluleke kakhulu eGibhithe? Uma kunjalo, ngena futhi umangale ngezindawo ezinhle kakhulu eZweni LoFaro.
UMagdalene ozisolayo, uCaravaggio eRoma
IPendaleent Magdalene ingumsebenzi wobuciko owenziwe nguCaravaggio oseRoma
ILumpia, isidlo esijwayelekile sasePhilippines
I-Cave Canem mosaic ePompeii
ICave Canem ingumfanekiso odumile odumile ovela emanxiweni asePompeii
Lapho ongabona khona okuhle kakhulu kukaGustav Klimt
Amagalari neminyuziyamu ekhombisa okuhle kakhulu kweGustav Klimt
Athini amasiko aseGibhithe?
Izwe looFaro linamasiko anelukuluku lokwazi futhi athakazelisayo. Faka futhi uzothola ukuthi yiziphi amasiko amakhulu eGibhithe.
Imizi ehamba phambili yokuhlala eNgilandi
Amadolobha amahle kakhulu ukuhlala eNgilandi awahlali ethandwa kakhulu noma yilawo esihlala siwabona ezikhangisweni zabavakashi zezinhlangano zokuvakasha
Izitsha ezijwayelekile zaseDashi nezinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle
I-Haring ingenye yokudla okuyinhloko nokujwayelekile kakhulu ekudleni kwase-Dutch futhi kusondele kakhulu kulokho okuphathelene nenhlanzi ne-shellfish.
Umsuka weNdlu ye-Orange-Nassau, indlu yasebukhosini yaseDashi
I-athikili emfushane ngeNdlu yase-Orange-Nassau, igatsha leNdlu yaseNassau ebambe iqhaza elibalulekile emlandweni weNetherlands naseYurophu.
Izinkundla ezinkulu zebhola ePortugal
Uma uvakashela leli lizwe, akufanele uphuthelwe yithuba lokubona izinkundla ezinkulu zebhola ePortugal
Umsebenzi weqiniso wePiramidi Enkulu, wembuliwe
Udokotela wezakhiwo waseSpain usenze sashintsha indlela yethu yokubona iPhiramidi Elikhulu. Kanjani? Faka ukuthola ukuthi yini umsebenzi wawo weqiniso.
Umgodi Wokukhanyisela wethempeli laseTodaiji
Ithempeli laseTodaiji eNara linomgodi odumile othembisa ukukhanyiselwa kulabo abakwazi ukuwuwela. Lapha sikutshela okuningi.
Lapho kwakhiwa amapiramidi aseGibhithe
Ziyizikhumbuzo eziheha kakhulu ezweni lakwaFaro. Futhi ziyamangalisa. Thola ukuthi amapiramidi aseGibhithe akhiwa nini.
Izikhumbuzo ezivela eGibhithe
Akukho okufana nokuvakashela izimakethe zendawo ukuhlangana nabantu bezwe. Kepha okuhle kakhulu yizikhumbuzo ezivela eGibhithe ongazithenga.
Amapulazi eLavender eTuscany
Ungawavakashela kanjani amapulazi e-lavender aseTuscany
Sinjani isimo sezulu eGibhithe
Ngabe uhlela ukuya ezweni leNayile kepha ungazi ukuthi isimo sezulu sinjani eGibhithe? Faka ngizokutshela ngokuningiliziwe konke odinga ukukwazi ukujabulela.
Izimbali zeKanrensetsu nezimbali ze-lotus
Izimbali zeLotus zaziswa kakhulu eJapan. Lapha sikutshela imininingwane ethokozisayo mayelana nesitshalo nobudlelwano baseJapan naso.
I-rice pudding, i-dessert eyiqiniso yase-Argentina
Ilayisi pudding iyi-dessert eyiqiniso yase-Argentina.
Isifanekiso sehhashi likaDa Vinci
'Sab', inoveli yokuqala elwa nobugqila emlandweni
Namuhla sikhuluma ngezincwadi zaseCaribbean futhi sihlenga inoveli ethi 'Sab', ebhalwe nguGertrudis Gómez de Avellaneda waseCuba, othathwe njengenoveli yokuqala yokulwa nobugqila.
Izithabathaba ezibizayo kunazo zonke | | Ingxenye yesibili
Uhambo lwezindawo ezibiza kakhulu nezibizayo zodumo.
Kungani kukhala imisindo ngoMsombuluko wokuqala enyangeni yonke
NgoMsombuluko wokuqala enyangeni, ngo-12 emini, izinhlabamkhosi nama-alamu aseNetherlands aqala ukukhala, ungesabi! kukhumbuza iMpi Yomshoshaphansi.
Zingaki izifunda ezikhona eJapan?
Sibala izifunda lapho insimu yaseJapan ihlukaniswe khona, sizihlukanisa ngezifunda.
ICosta Smeralda, ehamba phambili eSardinia
I-Emerald Coast ingenye yamaphethelo amahle kakhulu eSardinia
Isijobelelo Semfihlo, i-Anne Frank House
I-Secret Annex, ePrinsengracht 267, iyindlu evakashelwa kakhulu e-Amsterdam, yindlu lapho u-Anne Frank ayehlala khona futhi kuyo wabhala ingxenye enkulu yedayari yakhe.
Isikhathi esihle sokuvakashela iMérida
Ekwindla, iMérida idolobha elihle kakhulu, elinesimo sezulu esipholile.
IHalo-halo, uphudingi wendabuko wasePhilippines
IHalo-halo iyi-dessert yendabuko yasePhilippines
Imikhosi yendabuko ePortugal
Kungenzeka kanjani ukuthi kungenjalo, ePortugal kunenqwaba yemikhosi yendabuko nemikhosi egujwa minyaka yonke futhi izivakashi ezingazijabulela ngesikhathi sokuhlala kwabo ezweni laseLusitanian.
Ngo-Ephreli 25, uSuku Lokukhululwa E-Italy
Ngo-Ephreli 25, kugujwa uSuku Lwenkululeko e-Italy
Ingubo yezikhali nezimpawu zedolobha lase-Amsterdam
Ingubo yezikhali yase-Amsterdam ineziphambano ezintathu, "iziphambano zaseSt. Andrew" ngokuhlonipha uMphostoli Andrew, owayengumdobi, futhi wabulawelwa ukholo esiphambanweni esimise okwe-X.
Amasiko, ubuciko kanye nomculo ePeru
Ngenxa yomlando wayo, isiko lasePeru liyingxube yamasiko ahlukahlukene kepha lokho kufaka umehluko omkhulu kuye ngesifunda sezwe.
Izinkundla zebhola ezinhle kakhulu eNgilandi
INgilandi yizwe elidlala ibhola ngokwesiko, ngakho-ke akumangazi neze ukuthi ezinye zezinkundla zebhola ezisezingeni eliphakeme eNgilandi nasemhlabeni jikelele zitholakala lapha.
Umsuka wama-alfajores nokudla okulula kwe-cordovan
Namuhla siyazi imvelaphi yeCordovan alfajores kanye nokudla okulula, imikhiqizo ejwayelekile yesifunda sesifundazwe saseCórdoba.
Ingoma yothando yasendulo yaseGibhithe
Umlingisi nomculi uPeter Pringle uqambe iculo lothando lasendulo laseGibhithe ngombhalo othathwe kuChester Beatty Papyrus. Ngabe uyafuna ukuwuzwa?
I-Cordovan alfajores iresiphi
Iresiphi yendabuko yeCordovan alfajores kulula kakhulu ngakho-ke unganambitha ukunambitheka kwangempela kwalo mkhiqizo wesifunda odumile.
Ubhiya waseDashi, phakathi kwezinhle emhlabeni
IHolland izwe elinenkambiso ende kabhiya, yisiphuzo salo sikazwelonke, futhi bathi eNetherlands ungathola okuhle kakhulu emhlabeni.